साँगाको एक घरमा एक्कासी तापक्रम बढ्दा त्रास - Media Chok
साँगाको एक घरमा एक्कासी तापक्रम बढ्दा त्रास
२०७८ भाद्र ८, मंगलबार मा प्रकाशित ५ महिना अघि
१३०२ पाठक संख्या
बनेपा नगरपालिका १३ साँगाका भुवन न्हुच्छे प्रधानको घरमा एक्कासी तापक्रम बढेपछि त्रास बढेको छ ।
प्रधानको घरको भुइतल्लामा रहेको किराना पसलकोे भुई र सँगैको शौचालयमा असमान्य तापक्रम बढेकोले त्रास बढेको बताए । डरकै कारण आफ्नो किराना पसल नखोलेको ताए ।
एक्कासी तापक्रम बढेपछि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका रजिष्टार भुगर्वविद् डा. सुवोध शर्माको टोलीले निरीक्षण गरेका छन् । त्यस्तै खानी तथा भुगर्व विभागले समेत उक्त ठाउँको निरीक्षण गरेका छन् । भुगर्वविद् कुमार खड्काको टोलीले तापक्रम बढेको बारे निरीक्षण गरेका छन् ।
काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका रजिष्टार भुगर्वविद् डा. सुवोध शर्माले भुकम्पका कारण जमिन फाटेर चुना भएको चट्टानमा पानी पुगेकोले तातेको जानकारी दिए । चुनामा पानी पर्दा तापक्रम बढ्ने गरेको जानकारी दिए । तर भुगर्वविद् कुमार खड्काले अरथिङ तार लिकेज, इलेक्ट्रीफिटिङ मिसिङ भइ घरमा तापक्रम असामान्य भएको जानकारी दिए । पसल कोठा र शौचालय क्षेत्रको भित्तामा एकै साइडमा मात्र तापक्रम भएको अन्यत्र सर्दै नगएकोले भुर्गवीय कारण नभएको खड्काको भनाई छ ।
तापक्रम असमान्य रुपमा भएको उक्त घर वरीपरी भने भिमसेनको मन्दिर, तलेजु भवानीको प्रतिस्थापीत मुर्ति रहेको छ । ततापक्रम बढेको घटनामा अवस्था बुझ्न जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको प्रमुख उद्धव केसी, वडाअध्यक्ष सुर्यनारायण नापित लगायतको टोली घटनास्थल पुगेका थिए ।